Imidlalo Ephezulu Yekhasino - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Imidlalo ephezulu ye-Casino
Posted on August 6, 2018 August 7, 2018 Umbhali Andrew	Amazwana Off emidlalweni ephezulu yamakhasino
Ukubheja kuyingxenye yempilo yabantu iminyaka eminingi; kungakhathaliseki ukuthi i-flutter encane noma izingozi eziphezulu, kukhona okuthile okudonsa abantu ezweni lokubheja. Ngaleso sikhathi, kuye kwasungulwa imidlalo ehlukahlukene, ngokuletha ukuthakazelisa nokuthakazelisa okusha, nethuba elandayo lokuwina. Nakuba imidlalo ye-intanethi ihamba kancane kodwa ngokuqinisekile idlula ukufika kwamakhasino, ayikho into ephikisayo yokuthi ama-hotspots afana ne-Las Vegas ahlala ewumsebenzi wokuvakasha, kanti amakhasino abona izigidi zabadlali njalo ngonyaka. Yiziphi imidlalo eziphezulu, noma kunjalo? Ngezansi kunezintathu ukubuka.
Ngokucatshangwa ukuthi omunye wemidlalo yasekhasino eyaziwa kakhulu yi-poker. Iqale ukudlalwa kwi1829 eNew Orleans, lo mdlalo ukhule ngokuthandwa kuwo wonke amashumi eminyaka. Namuhla kubhekwa njengomdlalo ngaphakathi e-United States, futhi kune-World Series yawo lapho izimbangi zikhokha imali ephakeme yama- $ 10,000 yokungena, kufakwa kumabonakude nasezindabeni. I-"all aliyense ewina" ye-Poker ekholisayo iyona edonsela abadlali kaningi ngokutholakala kwamakhasino aku-inthanethi avumela abantu abaningi ukuzama inhlanhla yabo. Kunokwehluka okuningi kwePoker, iTexas Hold 'Em idlalwa kakhulu. ETexas Hold 'Em, kukhona imijikelezo emine yokubheja, nabadlali abadinga ukuhlanganisa amakhadi amahlanu wesandla esihle kakhulu. Ngobuchwepheshe obuvela nsuku zonke, manje sekunezindlela eziningi kunangaphambili zokubamba iqhaza kumdlalo wePoker, njenge i-Bitcoin i-Poker. Esikhundleni sokubheja imali yakho eyinkimbinkimbi, inhlanzi ibambelela esikhundleni sokunye okujabulisayo.
Uma ubonile noma yikuphi ukuboniswa kwe-TV noma i-movie eyenzeka ngaphakathi kwekhasino, uzobe ubona itafula le-roulette, ngesondo layo lesithonjana, ibhola eliphambukayo kanye netafula elide. Ngenye yezemidlalo zokuqala zekhasino, kusukela ku-18th I-Century France. Kuyinto umdlalo onobungozi, ngezinsika eziphakeme kune-Poker, nokho yilokho abanye abadlali abakuthola bekuthokoza kakhulu. Umqondo ulula; ubeka ukubheja kwakho kumbala noma inombolo, noma usethe (njengokuthi 'Ngisho'), umthengisi uphinde ahlasele ibhola, futhi uma ihamba ngenombolo / umbala / isethi ehambisana nokubheja kwakho, uyawina. I-roulette idonsa abadlali njengoba kungumdlalo wezenhlalo, lapho uxhumana nabadlali abathandekayo nomthengisi, kanye nokuthakazelisa lapho ibhola liyowela khona. Kuyashesha, ngokushesha kakhulu kunezinye imidlalo ze-casino ezifana ne-Poker, okusho ukuthokozisa kusheshayo uma uthola. I-Roulette inhle kubaqaphi ku-casino, njengoba kungenye yezinto ezilula ukuzithola bese uzama.
Esinye isithombe sodumo esivela kumakhasino anamuhla, imigqa yemishini ekhanyayo, ekhanyayo, ekhanyayo. Umdwebo we Umshini wokushisa ekugcineni lilele neqiniso lokuthi ungadlala ngokubheja okuphansi kakhulu, njenge-$ 1 ngesikhathi, futhi kulula kakhulu. Uvele ufaka imali ukuze uqale umdlalo, ongasuka kumageyimu wevidiyo kuya kumashini we-slot lapho udinga ukusunduza izinkinobho ezihlukahlukene ukuwina. Ukukhokha kusuka kumshini we-slot kungaba omkhulu, kufinyelela ku-$ 10,000.
I-130 ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti eLeijonaKasino Casino
I-20 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Cyber ​​Club Casino
I-150 yamahhala i-casino e-Swanky Bingo Casino
I-50 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi ku-All Star Slots Casino
I-105 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi eRoyal Ace Casino
I-20 mahhala ayikho ibhonasi ye-deposit ku-PrimeSlots Casino
I-85 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-TouchLucky Casino
I-120 yamahhala e-Thebes Casino
I-70 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-Fortune Frenzy Casino
I-80 yamahhala i-spin bonus at.dk I-Casino
I-165 mahhala ayikho ibhonasi yediphozi eBetChain Casino
I-35 yamahhala igodla ibhonasi yekhasino ku-Hello Casino
I-20 yamahhala e-AllBritish Casino
I-145 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Buzz Slots Casino
I-100 yamahhala e-spin casino e-Real Vegas Online Casino
I-100 i-spins ibhonasi yamahhala e-Norges Casino
Izinkanyezi ze-175 zama-Malibu Club Casino
I-15 mahhala i-spin bonus ku-Norgesspill Casino
I-105 yamahhala i-casino e-Thrills Casino
I-125 mahhala i-spin casino e-Plenty Jackpots Casino
I-155 yamahhala e-Malibu Club Casino
I-140 ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit e-Blu Casino
I-115 yamahhala i-spin casino e-Plenty Jackpots Casino
I-90 yamahhala i-spin casino e-Pocket Vegas Casino
I-130 yamahhala i-spin bonus ku-Jackpot Mobile Casino
yekhasino net com